Fomba roa hampiharana ny firafitra amin'ny volavolanay ao amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Afaka misafidy amin'ny fanoharana ataontsika isika ampidiro ny firafitra izay hitondra fahasamihafana lehibe kokoa amin'ny asantsika, dia hahatonga azy ireo hahaliana kokoa amin'ny fahitana, hamorona fahatsapana vaovao ary hampanan-karena ny asa.
Raha mampihatra endrika ao amin'ny Photoshop ananantsika safidy isan-karazany arakaraka ny vokatra tiantsika ho tratrarina.
Ireto misy fomba roa hampiharana lamba amin'ny volavolantsika.
Misafidy ny firafitra tiana hampiasaina izahay ary mampiditra azy ao anaty rakitra izay ananantsika ny sary.
Misafidy ny loko tianay ampiharina amin'ny firafitra izahay ary izao dia mankany amin'ny Sary> Fanitsiana> Sarintany gradient isika. Hisokatra ny varavarankely izay mampiseho amintsika ny bara izay miseho amintsika ny loko nofidianay sy ny loko fotsy fotsifotsy (ny fitaovan'ny sarintany gradient dia mampihatra hatrany ireo loko ananantsika eo aloha sy any aoriana). Izahay izao dia manindry indroa ny gradient ary mampihetsika ireo bara gradient izay miteraka fifanoherana lehibe kokoa raha tiantsika, noho izany dia afindrantsika mankany afovoany izy ireo.
Raha vantany vao ananantsika ny firafitra mifanaraka amin'ny tiantsika azontsika atao ny manova ny maody sosona, ny opacity na mamafa ny faritra tsy mahaliana antsika, arakaraka ny fomba tiantsika hanome ny fanoharana.
Raha toa ka faritra iray ihany no ampiharintsika ny sosona, misafidy ny faritra mahaliana antsika isika, mametraka ny tenantsika eo amin'ilay sosona misy ny firafitra ary ankehitriny manisy sarontava saron-tava aminy isika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sary masina fahatelo eo ambany manomboka amin'ny ankavia eo am-baravarankely, toy ny hita eo amin'ny ohatra.
Misafidy ny endritsika tiana hapetraka izahay ary manova azy io ho grayscaleMba hanaovana izany dia mametraka ny tenantsika eo amin'ilay sosona misy ny endritsika isika ary mankany amin'ny Image> Adjustments> Channel mixer> Monochrome.
Tsy maintsy ampidirintsika ao anaty rakitra mitovy amin'izay ananantsika ny volavolan-tsika ary apetrakao amin'izay tiantsika hampiharana azy.
Hodinihinay fa mainty sy fotsy ireo loko eo alohanay sy any aoriana. Miverina amin'ny Sary> Fanitsiana ary safidio> Sarintany gradient. Tsindrio indroa ny gradient hanovana azy. Hisokatra ny varavarankely iray izay tsy maintsy hamindrantsika ny bara mankeny afovoany ampitomboy kely ny fifanoherana.
Raha vantany vao vita izany dia afenintsika ny sosona rehetra ananan'ilay fanoharana, afa-tsy ny endriny. Ankehitriny dia hanao safidy amin'ny endritsika isika, mankany amin'ny vakizoro Window> Channels izahay. Tsindrio ny kisary izay hitantsika eo ambany ankavia izay miendrika faribolana misy tsipika tapaka ary izany no hisafidy. Azontsika atao ny manafina ny sosona ankehitriny ary mampihetsika ny sisa amin'ny soson'ilay sary.
Mba tsy hanelingelina antsika ny fifantenana rehefa mandoko, ny idealy dia afeno amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Control + H.
Mamorona sosona vaovao izahay ary manomboka mandoko ny loko safidinay izay tiantsika hampiharina ilay firafitra. Ny zavatra tsara momba ity fomba fampiharana lamba ity dia ny famelana antsika hifehy ny loko sy ny mangarahara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fomba roa hampiharana ny firafitra amin'ny volavolanay ao amin'ny Adobe Photoshop